U-ANAL DELICIA – Contos de Sacanagem
← ANAL DELICIA
Perguntamos aos leitores do BuzzFeed Brasil como foi a primeira vez deles com alguém do mesmo sexo. Aqui estão as melhores histórias: →
Sawubona, ngicela ukuthi ufunde umbhalo ongezansi, uthathe isikhathi, uyeke lokhu okwenzayo enkonzweni, uye endlini yangasese ….
Yebo kwenze njengoba ngikucelile …
Ukuze ube nolwazi oluphelele ….
Ngizokulinda ukuthi uzinze …
Silungile, khululeka, khohlwa ngezinkinga nezimo ezenzekayo manje, thatha le minithi ube ngokwakho …..
Ngiyethemba unolwazi oluhle …
Lapho, ungaqala futhi ufunde kahle …
Isithombe sakho unqunu, sigqamisa imbongolo yakho emnandi sikhanyise i-boner enkulu.
Ukucabanga ngawe usuku lonke, mhlawumbe …
Kepha namhlanje, ngezifiso ezihlukile …
ngikubeke kuzo zozine, unqunu embhedeni, yehlisa ikhanda lakho kumatilasi, ubambe imbongolo yakho ngokuthola imbongolo yakho …
Ngingayinuka kakhulu, ngiyayithanda iphunga layo eligxile kuyo, empeleni kuyinto yesilwane.
Ngangiqala ukuqabula imbongolo yakho, ngenkathi wena umunwe uhlola i-pussy yakho ne-grill yakho, ngikulalele ububula ngenkanuko
Ngemuva kokuqabula okumbalwa, bengigijimisa ulimi lwami phezu kwembongolo yakho, ngiyishiye imanzi, ngiqabule, ngiyikhothe bese ngifaka ulimi lwami embongolweni yakho
Ukububula kwakhe kuyanda, isibumbu sakhe simunca isandla sami
Ngeminwe yami emanzi ngiyinamathisela embongolweni yakho, uthola i-horny, umunwe owodwa, iminwe emibili, iminwe emithathu, ngenkathi ngifaka iminwe yakho, uqala ukuza uhambe ungazi futhi umnandi
Ubheka emuva bese uthi “ngidle simnandi, faka ingquza yakho embongolweni yami, ungidle”
Iqhude lami lilukhuni ngenkanuko, bese ulifaka esifubeni sakho esimanzi, ngasikhathi sinye, kushisa futhi kumanzi ukhalela kakhulu, wandise umsindo we-TV.
Ngilawule ukuthi ngingangeni embotsheni yakho
Uthi “kumnandi kanjani, kepha ngifuna udokotela wakho embongolweni yami”
Ngisusa induku esikhunjini, ngithinte imbongolo yakho, uyathuthumela, ngiphusha kancane, uthi “cha, ngiphethe”
Futhi kancane kodwa ngokuqinile uzobe uphoqa imbongolo yakho ekhanda likadick wami
Ngemuva kokumelana okufushane, uyakhululeka futhi ikhanda lakho lingena embongolweni yakho. Unikeza ukukhala okuncane okuxubene nokububula.
Iyama imizuzwana embalwa, bese iqhubeka futhi igwinye iqhude lami ngamasentimitha.
Udokotela wami ugwinyiwe futhi ucindezelwe imbongolo yakho kuze kube yilapho imbongolo yakho ingithinta imbila yami, unenye i-orgasm futhi ngiyahlanya nalo lonke iqhude lami ngaphakathi kuwe.
Uqala ukuza nokuhamba kancane kakhulu futhi okumnandi, imizwa iyamangalisa Ngizama ukuzibamba ukuze nginganyakazi futhi ngikuvumele uku-oda ukuze ube nenjabulo enkulu
Ukunyakaza kwakhe kuyanda, ngibambelela okhalweni lwakhe, ngikhama kodwa ngilandele ukunyakaza kwakhe.
Ngiqala ukunyakaza okuya emuva naphambili, angisenamandla okulawula, inkanuko inkulu kakhulu, imizimba yethu iyavumelaniswa, sandisa ukunyakaza, ngibheka futhi ngijabule ngibukele udokotela wami enyamalala ngaphakathi kwembongolo yakho, ukunyakaza kuyashesha, kububula futhi.
Lapho-ke, imbongolo yakho ikumunca ku-pussy yakho inezinciphiso ezingathinteki, futhi uyayijabulela, ama-orgasms, ukububula, imizuzwana kamuva ngibe ne-orgasm enkulu, injabulo ngaphakathi kwezimbongolo zakho, iyashisa, imizimba yethu iyazamazama
Sima imizuzwana embalwa, sizwa konke okwenzekayo emizimbeni yethu,
Wafika ngamandla waze waconsela eshidini, wacwila ngaphansi kwethu.
Siwela embhedeni, udokotela wami uthamba aze aphume embongolweni yakho
Sihlala silele phansi, “sikhethiwe”, siqabulana isikhathi eside futhi kamnandi.
Ngivula amehlo ami, angikuboni, ngiyaqaphela okwenzekayo, futhi ngiyabona, ngakho konke ukuzijabulisa kwami, ukuthi bekuyiphupho, iphupho elimnandi, engithemba ukuthi lingafezeka.